Senatera Olivier Rakotovazaha : Mangataka fialan-tsiny ampahibemaso -
AccueilSongandinaSenatera Olivier Rakotovazaha : Mangataka fialan-tsiny ampahibemaso
Araka ny efa fantatra, dia notorian’ny senatera Olivier Rakotovazaha teny amin’ny Fitsarana, andro vitsy lasa izay ny sekreteran’ny antoko TGV eto Antananarivo, Hery Rasoamarimaka na Hery-Be, noho ny fandrahonana sy herisetra nataon’ity farany azy teny amin’ny toeram-piasany teny Ampefiloha.
Noho izany indrindra, dia mangataka onitra amin’izany zava-nanjo azy izany ity senatera ity. “Mangataka onitra aho tamin’ny zava-nitranga tamiko. Tsy voatery ho vola anefa izany fa mangataka aho ny hanaovany fialan-tsiny ampahibemaso”, hoy ny senatera Olivier Rakotovazaha.
Notsiahivin’ity loholon’i Madagasikara ity fa nitongavan’ingahy Hery-Be sy ireo depiote vitsivitsy miaraka amin’ireo mpanara-dia aminy tao amin’ny birao fiasany tetsy Ampefiloha izy sy ireo mpiara-miasa aminy, ny faramparan’ny volana avrily teo. Tamin’izany indrindra no nanaovan’izy ireo “ramatahora” ireo mpiasa rehefa tsy nanaiky ny hanara-dia azy ireo ho eny amin’ny Kianjan’ny 13 mey. Tsy vitan’izay fa mbola nanao herisetra sy bontolo tao amin’ity toeram-piasan’ny loholona ity izy ireo, ka nanidy ny senatera Olivier Rakotovazaha tao amin’ny biraony.
Izany rehetra izany no nitorian’ity loholon’i Madagasikara ity an’ingahy Hery-Be teny amin’ny Fitsarana.
Ankoatra izay, dia nipoitra teny amin’ny Toby Jeneraly Ratsimandrava ihany ity sekreteran’ny antoko TGV eto Antananarivo ity omaly, rehefa tsy tazana tamin’ny fampanantsoan’ny zandary azy ny alatsinainy lasa teo. Tontosa tamin’ny omaly ny ampahany amin’ny fanadihadiana atao aminy. Marihina mantsy fa antony nampanantsoana an’i Hery-Be ny fanadihadiana atao aminy mahakasika ny fandrahonana, fanohintohinana filaminam-bahoaka, fanaratsiana sy fanompana. Raha ny vaovao voaangona anefa, dia nolaviny avokoa ny fiampangana izay nanaovana fanadihadiana azy. Mbola tsy tontosa kosa ny fihainoana sy ny fanadihadiana azy mahakasika ny fanohintohinana ny filaminam-bahoaka.
Marihina fa rehefa tontosa avokoa ny fanadihadiana ataon’ny zandary an’i Hery-Be, avy hatrany dia alefa eny amin’ny Fitsarana eo anivon’ny fampanoavana ny valin’ny fanadihadiana, ary miandry ny fitsarana mahakasika ny fitoriana azy ity sekreteran’ny antoko TGV Antananarivo ity.